ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / ဒီရေချိုးခန်းဗီရို၏ဤရွေးချယ်ရေး, ဝယ်ယူရန်နောင်တမရပါ!
2020 / 10 / 14 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 789 0
ရေချိုးခန်းဗီရိုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ပုံမှန်ရေချိုးခန်းအဖြစ်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးရေချိုးခန်းသိုလှောင်ရန်အလွန်ကြီးသောတာဝန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်သောစကားလုံးတစ်လုံးကိုရွေးလျှင်၊ ရေချိုးခန်း၏တန်ဖိုးသည်လက်ကိုမြှင့်တင်ရန်၎င်းကိုအားကိုးနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်မသေချာသောအရာမဟုတ်ပါ၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ နောက်တစ်ခုကရေချိုးခန်းအလှဆင်ပုံစံနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းသည့်အချက်များကိုရွေးချယ်ပါ။ လူများကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
ရေချိုးခန်း ၀ ယ်နည်းကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း။
ရေချိုးခန်းဗီရိုသည်ရေချိုးခန်းတွင်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်၊ ပိုင်ရှင်၏လှပမှုနှင့်အရသာကိုပြသရန်အရေးကြီးသောအိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက် ၀ ယ်တဲ့အခါစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကတော့ရေချိုးခန်းဗီရိုရဲ့ပုံစံပဲ၊ သူတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်အလှဆင်ပုံနဲ့ကိုက်ညီရမယ်။
တရုတ်ပုံစံအသစ်သည်တရုတ်စတိုင်၏ရိုးရှင်းသောကူးယူချက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်တရုတ်စတိုင်နှင့်ခေတ်သစ် element များမှထုတ်ယူထားသောရိုးရာဒြပ်စင်များပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဤရေချိုးခန်းဗီရိုပုံစံသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အဓိကကျသောပစ္စည်းအဖြစ်အစိုင်အခဲဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းတွင်ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးသောပုံစံကိုအသုံးမပြုဘဲပိုမိုရိုးရှင်းသောဂျီ ometric မေတြီမျဉ်းများကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဒီရေချိုးခန်းဗီရိုပုံစံကိုပိုပြီးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မာစတာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ခေတ်သစ် Minimalist စတိုင်
ခေတ်သစ်ရိုးရှင်းသောရေချိုးခန်းဗီရိုများသည်လက်တွေ့ကျမှုနှင့်ဗေဒကိုပိုမိုအာရုံစိုက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအခန်းရေချိုးခန်းပုံစံသည်အရောင်အသွင်အပြင်အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အလင်းအရောင်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်၊ သိုလှောင်မှုလုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်အားကောင်းသော်လည်း၊ အိမ်ထောင်စုငယ်များအတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
မြေထဲပင်လယ်ပုံစံသည်အလှဆင်သည့်ပုံစံအားလုံး၏ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ မြေထဲပင်လယ်ပုံစံသည်စပိန်နိုင်ငံရှိအဖြူရောင်သဲသောင်ပြင်နှင့်အဖြူနှင့်အပြာကမ်းခြေတို့မှလာသဖြင့်အဖြူနှင့်အပြာသည်အဓိကအရောင်များဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒီအရောင်နှစ်မျိုးဟာစိတ်သက်သာစရာ၊ လွတ်လပ်မှုခံစားမှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်။
ဆိုင်းငံ့ထားသောရေချိုးခန်းဗီရိုများသည်နေအိမ်အများစုအတွက် ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကက်ဘိနက်ကိုကြမ်းပြင်နှင့်သီးခြားခွဲထားသည့်အောက်ခြေရှိ၎င်း၏ဆွဲထားသောဒီဇိုင်းကြောင့်၎င်းသည်အစိုဓာတ်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုထိရောက်စွာပျံ့နှံ့စေသည်၊
ထို့အပြင်၎င်းသည်အာကာသအတွင်းအာရုံကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းရရှိသည်။ ဒါကြောင့်အိမ်ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီမှန်ကူတာတူအဆင့်တူပါ ၀ င်တဲ့ဒီကက်ဘိနက်တပ်ဆင်ထားရင်တောင်ပြည့်ကျပ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သို့သော်ရေချိုးခန်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအခြေခံအားဖြင့်စိုစွတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အိမ်သည်ခြောက်သွေ့။ စိုစွတ်သောအထီးကျန်ခြင်းမဟုတ်ပါကကြမ်းပြင်မှမျက်နှာကျက်သောရေချိုးခန်းဗီရိုများသည်ရေနှင့်ထိတွေ့လေ့ရှိပြီး၊
ထို့ကြောင့်ကြမ်းပြင်ရေချိုးခန်းဗီဒိုများကို ၀ ယ်သောအခါ၊ သက်တမ်းတိုးရန်အတွက်ကြမ်းခင်းရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်၏အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံကိုမဖြည့်ဆည်းစေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သောရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်၏နှစ်ဖက်စလုံးရေစိုခံအလွှာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
၀ န်ကြီးအဖွဲ့ ၀ င်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုအရ ၃
အစိုင်အခဲ Wood က
သို့သော်ရေချိုးခန်းပတ် ၀ န်းကျင်၏တိကျမှုကြောင့်ရာဘာသစ်ကိုရေချိုးခန်းဗီရိုများပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ဤသစ်သားသည်ရေစိုခံ။ ရေခန်းခြောက်ခြင်းအပြင်ရေစိုခံနိုင်မှုနှင့်အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်သည့်အခြားရေစိုခံကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
ဤပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရေချိုးခန်းပုံးများသည်ခေတ်မီခံစားမှုရှိသောရေချိုးခန်းအာကာသကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေစဉ်ခေါက်ပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ချွန်ထက်သောအရာဝတ္ထုများကိုသင်သတိထားရမည်။
ဤပစ္စည်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော anti-slip anti-scratch စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ ရေချိုးခန်းဗီရို၏အကောင်းဆုံးသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်သည်။
သို့သော် PVC ပစ္စည်းတွင်လည်းအားနည်းချက်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ကလေးလံသောအရာဝတ္ထုများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတင်ထားလျှင်ပုံပျက်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဤပစ္စည်း၏အထွေထွေအရွယ်အစားသည်အနည်းငယ်သေးငယ်ပြီးမိသားစုသုံးစုအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။
၂။ ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိသွားတိုက်ဆေးကိုကြားနေ၊ ကျပန်းအသုံးပြုခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆပ်ပြာရည်သည်လည်းပိုးမွှားကောင်းသည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
3, ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်ကိုမကြာခဏအချို့ဆပ်ပြာ, သန့်စင်ရေးနှင့်အခြားသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်နေရာချလိမ့်မည်, သတိမရှိသောဆပ်ပြာစီးဆင်းမှုကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်အကောင်းဆုံး (သို့မဟုတ်အထည်အလွှာအောက်ရှိသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များတွင်) ။
1, ကိုင်တွယ်အတွက်ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်, အလွယ်တကူရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆွဲမခဲယဉ်းကြဘူး, ကက်ဘိနက်ကြေးမုံကဲ့သို့သောမြေပြင်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းစသည့်အရာများသည်နူးညံ့ခြင်းမရှိစေရန်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများနှင့်တွဲဖက်ထားသင့်သည်။ မြေပြင်အပြားမဟုတ်, အစိုင်အခဲခြေထောက် pad ပါဖြစ်သင့်သည်။
2, ပိုက်ထဲသို့ရေတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သိပ်သည်းချိတ်ဆက်ဖို့ရေပိုက်ကိုသွားပါ, နှင့်ကက်ဘိနက်ကိုထိခိုက်ယိုစိမ့်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်မှန်မှန်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
3, ရေစိမ့်ဝင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မျက်နှာပြင်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ကက်ဘိနက်၏မျက်နှာပြင်ခြစ်ရာချွန်ထက်သောခက်ခဲအရာဝတ္ထုကိုမသုံးရ။
4, တိုက်ရိုက်အလင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့, ကက်ဘိနက်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်တားဆီးဖို့။ လေဝင်လေထွက်အခန်းကိုထားပါ။
မတူကွဲပြားသောစတိုင်များ၊ ကွဲပြားခြားနားသောရေချိုးခန်းဗီရိုပုံစံများသည်သင့်အားအမြဲတမ်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုယူဆောင်လာနိုင်သည်။ အထက်ပါသည်ရေချိုးခန်းဗီရိုများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများအကြောင်း၊ ၎င်းသည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ရှေ့သို့ :: ဒီရေချိုးခန်းဗီရို၏ဤရွေးချယ်ရေး, ဝယ်ယူရန်နောင်တမရပါ! နောက်တစ်ခု: Kohler သည်ကျော်ကြားသောစမတ်ရေချိုးခန်းကုမ္ပဏီအားပျက်စီးမှုအတွက်ဒေါ်လာ ၁.၄ သန်းကျော်ဖြင့်တရားရုံးတွင်တင်ခဲ့သည်
ရေချိုးခန်း“ နံနေတဲ့” ဆိုတာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာမင်းသိပါသလား။ လက်ျာဘက်ရှာပါ ...
ရေချိုးခန်းကြေးမုံပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ၉၉% သောလူများသည်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုမည်
Leaky Faucet? Rusty? ရေကနှေးနေသလား။ ၎င်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း
4.95m2 စကန်ဒီနေးဗီးယန်းစတိုင်၊ ဒီလူငယ်စုံတွဲရဲ့ရေချိုးခန်းဟာပိုလို့တောင် ...